အသက်ကိုပါ ရန်ရှာနိုင်တဲ့ မာလာရှမ်းကောကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုစားကြမလဲ ? | The Restaurant Guides for Myanmar
အဆီအစိမ့်တွေ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ မာလာရှမ်းကောဟာ အစားမတော်ရင် ဝိတ်အဆမတန် တက်လာစေတဲ့အပြင် အနှစ်ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက အခန့်မသင့်ရင် အသက်ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်များတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မာလာရှမ်းကောကို တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ထက် ပိုမိုစားသုံးရင် ကြာလာတဲ့အခါ နှလုံးအဆီဖုံးခြင်း၊ သွေးတွင်းအဆီများခြင်းနဲ့ ကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါတွေအပြင် ရင်ကြပ်အခံ ရှိတဲ့သူတွေသာဆို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူငယ်တော်တော်များများ မာလာရှမ်းကောနဲ့ မကင်းဝေးနိုင်ကြတာ အမှန်ပါပဲနော်။ ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တွေ များလာတာကတစ်ကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပါဆယ်ဝယ်လို့ ကောင်းတဲ့ အစားအစာ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း၊ အပြိုင်အဆိုင် ပရိုမိုရှင်းတွေ ပေးနေတာကတစ်ကြောင်း စသဖြင့် စားဖြစ်နေကြတာ ချည်းပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုမျိုး အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ မာလာရှမ်းကောကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုစားကြမလဲ?
၁။ ဝက်အဆီ ရှောင်ပြီး စားပါ။
မာလာရှမ်းကောထဲ ထည့်ဖို့ အသားတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ သုံးထပ်သားနဲ့ အဆီများတဲ့ နေရာက ဝက်သားကို ရှောင်ပြီး စားပါ။
၂။ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ အစိမ်းရောင်အရွက် များများထည့်ပါ။
အရွက်များများ ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗိုက်ပြည့်လွယ်စေတဲ့အပြင် အဆီလည်း အများကြီး မတက်ဘူးနော်။
၃။ အသားလုံး တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
အသားလုံးတွေထဲမှာ ဝက်မှိုလုံးနဲ့ ဟင်းထုပ်လို့ခေါ်တဲ့ Meat Ball တွေက အဆီအများဆုံး ပါဝင်ပါတယ်နော်။ မာလာရှမ်းကော မရှောင်နိုင်ရင်တောင် ဒီအသားလုံးတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
၄။ မာလာရှမ်းကော အရည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
နဲနဲတော့ ထူးဆန်းမယ်ထင်ပါတယ်။ မာလာရှမ်းကော စားတဲ့သူ (၁၀၀) မှာ (၉၉) ယောက်က အသုပ်ပဲ မှာစားကြတာမို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အသုပ်မှာက အရည်ထက် အဆီပါဝင်မှု ပိုများတာကြောင့် ဝိတ်ပိုတက်စေသလို အန္တရယ်လည်း ပိုများပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် အရည်နဲ့ စမ်းစားကြည့်ပါ။
၅။ ထမင်းနဲ့ စားပါ။
မာလာရှမ်းကောကို ထမင်းနဲ့စားရင် ဗိုက်မြန်မြန်ပြည့်စေတာမို့ များများစားပြီး အဆီတက်တာကို ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အရွက်တွေကို အရင်စားပါ။
ပွဲရောက်လာလို့ စပြီးစားရင် အသားတွေကို အရင်မစားပါနဲ့။ အရွက်တွေကို ပထမဦးဆုံး စားပါ။ ပြီးရင် အသားလွှာနဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေကို စားပါ။ နောက်ဆုံးမှ အသားလုံးတွေကို စားပါ။
၇။ တစ်ယောက်ထဲ မစားပါနဲ့။
မာလာရှမ်းကောကို တစ်ယောက်ထဲ လုံးဝ (လုံးဝ) မစားမိပါစေနဲ့နော် အစားတလိုင်းတို့ရေ။ အနည်းဆုံး (၂)ယောက်ရှိမှ စားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အကြောင်းကတော့ တစ်ယောက်ထဲ အများကြီးမှာမိပြီး မကုန်တဲ့အခါ လွှတ်ပစ်ရခက်၊ နှမြောလည်းနှမြောမို့ မကုန်ကုန်အောင် စားမိတဲ့အခါ ပိုပိုပြီး အဆီကို တက်စေပါတယ်နော်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး မာလာရှမ်းကောကို မစားသုံးမိပါစေနဲ့နော်။ ကဲ၊ မာလာရှမ်းကောကို လုံးဝ မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အစားတလိုင်းတွေလည်း အခု ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားတဲ့နည်းကို သိပြီဆိုတော့ နောက်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးလေး စဉ်းစားပြီးမှ စားပေးဖို့ အကြံပြုလိုက်ချင်ပါတယ်။